Inguqulelo entsha yeGStreamer 1.18.0 sele ikhutshiwe | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeGStreamer 1.18.0 sele ikhutshiwe
Emva konyaka onesiqingatha yophuhliso, IGStreamer 1.18 ikhutshiwe, iseti yamacandelo eqonga ebhaliweyo kwi-C ukwenza uluhlu olubanzi lwezicelo ze-multimedia, ezivela kubadlali be-multimedia kunye nabaguquli beefayile zeaudiyo / zevidiyo kwizicelo zeVoIP kunye neenkqubo zosasazo.
Kwinguqulelo entsha i-API entsha yeefayile zokuhambisa ezenziwa ukusuka kwifomathi enye ukuya kwenye, kunye ukuphuculwa kwenkxaso ye-HDR, Inkxaso yolwandiso RTP TWCC kunye nezinye izinto ngaphezulu.
1 Iimpawu ezintsha zeGStreamer 1.18
2 Uyifaka njani iGstreamer 1.18 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Iimpawu ezintsha zeGStreamer 1.18
Kule nguqulo intsha ibonisiweyo Umsebenzi wenziwe ekuphuculeni inkxaso yeGstreamer y Que singafumana izongezo ezahlukeneyo kolu hlobo lutsha 1.8, njenge-plugin ye-AVTP (IProtokholi yeVidiyo yezoThutho yeVidiyo) yokuhanjiswa kwevidiyo kunye nokuhanjiswa kweaudio
Kanye kunye kunye nenkxaso entsha yeprofayile ye-TR-06-1 (RIST-Ezothembekileyo zoSasazo lwe-Intanethi) Ukukwazi ukutshintsha isantya sokudlala kubhabho kunye nenkxaso ye-RTP TWCC (uGoogle kuThintelo loThutho loThutho) kwi-rtpmanager.
Kwimeko ye- Windows, la izixhobo zokuhlaziya ividiyo ezikhawulezileyo zehardware ziyenziwa kusetyenziswa i-DXVA2 / Direct3D11 APIkunye ne-plugin yokufaka ividiyo kunye nokukhawulezisa ukufaka iikhowudi usebenzisa iMicrosoft Media Foundation. Inkxaso eyongeziweyo ye-UWP (Iplatifomu yeWindows yeWindows).
Kwiseva kunye nomxhasi, I-RTSP yongeze inkxaso yeendlela zokukopela (ukukrola ngokukhawuleza xa ugcina umfanekiso), echazwe kwi-ONVIF (Vula iForam yeNethiwekhi yeVidiyo yeNethiwekhi).
Iinkonzo zokuHlela zeGStreamer zongeza inkxaso yamaxesha amiselweyo, isantya esisekwe kwikliphu, kunye nokukwazi ukusebenzisa ifomathi ye-OpenTimelineIO.
Ukongeza kwi-Autotools esekwe kwizikripthi zokwakha zisusiwe kwaye iMeson ngoku isetyenziswa njengesixhobo esikhulu sendibano.
Olunye utshintsho olwahlukileyo yale nguqulo intsha:
I-API entsha ekumgangatho ophezulu, iGstTranscoder, icetyisiwe enokusetyenziswa kwizicelo zokuhambisa iifayile ukusuka kwifomathi enye ukuya kwenye.
Inkxaso eyongeziweyo ye-AFD (Inkcazo yeFomathi eSebenzayo) kunye neseti yeKhowudi yedatha yeBar.
Isixhobo se-qmlgloverlay songezwa ukuvumela imeko yeQt ekhawulezayo ukuba ivele ngaphezulu komsinga wevidiyo engenayo.
Isixhobo se-imagesequencesrc songezwe ukwenza lula ukwenziwa ngokulandelelana kwevidiyo kulandelelwano lweJPEG okanye imifanekiso yePNG.
Into ye-dashsink yongezwa ukuvelisa umxholo we-DASH.
Yongeze i-dvbsubenc element yokufaka ikhowudi kwimibhalo engezantsi ye-DVB.
Kuyenzeka ukuba upake imijelo ye-MPEG-TS ngenqanaba elincinci lokuxhasa kunye nenkxaso ye-SCTE-35, ngendlela ehambelana nenethiwekhi kamabonakude wentambo.
I-Rtmp2 yaphunyezwa ngophumezo lomthengi omtsha we-RTMP ngomthombo kunye nezinto ezamkelayo.
Umncedisi we-RTSP wongeza inkxaso yesihloko ukulawula isantya kunye nokukala.
Yongezwe i-svthevcenc, i-H.265 encoder yevidiyo esekwe kwi-Intel's SVT-HEVC encoder.
Yongeza into yevaapioverlay ukuqamba usebenzisa i-VA-API.
I-splitmuxsink kunye ne-splitmuxsrc izinto ngoku zixhasa ii-auux (AUX) zemijelo yevidiyo.
Izinto ezintsha zaziswa ukuze zifumane kwaye zivelise imilambo ye-RTP kusetyenziswa i "rtp: //" URI.
Yongeza into ye-rpicamsrc yokufaka ividiyo yekhamera yebhodi yeRaspberry Pi.
Ukuphuculwa kwengcaciso kunye nokulungiswa kwevidiyo ngoHlelo oluPhezulu lweDynamic (HDR).
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo malunga nale nguqulo intsha yeGstreamer ungajonga utshintsho Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani iGstreamer 1.18 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukuba unomdla wokufaka iGstreamer 1.18 kwi-distro yakho Ungayenza ngokulandela amanyathelo esabelana ngawo ngezantsi.
Inkqubo isebenza kuzo zombini iinguqulelo ezintsha ze-Ubuntu 20.04 kunye neenguqulelo zangaphambili ngenkxaso.
Ukufaka, Kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye kuyo sichwetheza le miyalelo ilandelayo:
Kwaye ukulungele ngayo, baya kuba sele beyifakile iGstreamer 1.16 kwinkqubo yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Inguqulelo entsha yeGStreamer 1.18.0 sele ikhutshiwe
Xa usenza loo miyalelo, ingxelo efakiweyo yi-1.14.5, ungachaza ukuba ungayifaka njani inguqulelo yamvanje ekhoyo? Ngaba kufuneka songeze indawo yokugcina eyongezelelweyo?
"Kwaye voila, baya kuba sele befakile iGstreamer 1.16 kwinkqubo yabo."
Kodwa awufuni ukufaka inguqulelo 1.18
I-MongoDB 4.4, uyifaka njani kwiinguqulelo zamva nje ze-LTS Ubuntu
Libertine: uzifaka njani ii-desktop kwi-Ubuntu Touch